पुरानो स्पाइस प्रेरणा: जब शंका मा, Go Dumb | Martech Zone
कहिलेकाँही मलाई मार्केटिंग र दीर्घकालीन रणनीतिहरू विकास गर्न मन पर्छ जुन ब्यापारको धारणा बदल्छ, एक ब्रान्डको स्वागत बढाउन, ड्राइभ बिक्री गर्दछ र कम्पनीको सफलतालाई स्काइरकेट गर्दछ। आज ती मध्ये एक होइन।
अनलाइन मार्केटिंग को दुनिया मा आगो छ शानदार को रणनीति पुरानो स्पाइस केटा.
यदि तपाईं सुन्नुभएन कि केहि मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, पुरानो स्पाइस केटा काममा गाह्रो छ उसको व्यक्तिगत युट्यूब च्यानलबाट ट्वीटहरूको उत्तर दिन। उहाँ ठूलो अनुगमन भएका मानिसहरूलाई प्रतिक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ तल साना अनुसरण गर्नेहरूलाई (तर प्रायः ठूलो संख्यामा अनुगमन हुनेहरू)।
के हामी साँच्चिकै त्यो उथले र गूंगा छौं? एक टावलमा ठूलो आवाज स voice्केतको साथ एक राम्रो देखिने केटा फेंक र उहाँलाई केही चम्किलो कमब्याक दिनुहोस् र संसारले यसलाई शुद्ध प्रतिभाको रूपमा हेर्दछ। के यो मूल हो? यो केवल छैन ड्याडी बुब अभियानहरूमा जानुहोस् पुन: आविष्कार? के यो साँच्चै हो? कि अचम्म?
गोधूलि? सेक्स र शहर? बियर विज्ञापनहरूमा भ्यागुताहरू? ड्याडी बूब्स जानुहुन्छ? पुरानो स्पाइस केटा? हुनसक्छ हामी सबै यति लाटो स्मार्ट हुन कोशिस गर्नु पर्छ र यसलाई अलि अलि अलि बेढो बनाउनु पर्छ।
पुनश्च: म त्यो अस्थिर र गूंगा हुँ। म यी विज्ञापनहरू मन पराउँछु र म पूर्ण ढोंग हुँ। जे होस्, म यस तथ्यको साथ खडा हुनेछु कि मैले पुरानो स्पाइसको गन्ध पाएको छैन किनकि मेरो बुवाले यसलाई in० को दशकमा स्टक स्टफरको रूपमा पाउनुभयो। मलाई लाग्दैन कि उनले कहिल्यै यो प्रयोग गरे यो प्रश्न सोध्छ,के यो अभियान वास्तवमा अधिक पुरानो मसला बेच्दै छ?"
टैग: व्यवसायहरूपुरानो मसलापुरानो मसला अभियानसामाजिक संजाल
होइन भन्दै विश्वास निर्माण गर्नुहोस्!
स्टीव नौकराहरू: तिनीहरूलाई केस खाऊ!
जुलाई,, २०१ at 15::2010। बिहान
मलाई यो अभियान मन पर्छ! के तपाइँ पुरानो स्पाइस केटा र एलिसा मिलानो बीच पछाडि र अगाडि पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? एलिसाले ओल्ड स्पाइस गाइलाई एक दर्जन गुलाब पठाएपछि तेल फैलिएको राहत कोषमा $ 100k पठाउन आग्रह गर्दै आफ्नै भिडियो प्रतिक्रिया पनि खिचेकी छिन्।
उनको जवाफ छ http://www.alyssa.com/
म यसलाई माया गर्न पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु, प्याट्रिक। यद्यपि यो मेरो बिन्दु हो। के हामीले हाम्रा सबै परिष्कृत लक्ष्यीकरण र ड्रिप अभियानहरू त्याग्नु पर्छ र केवल केहि हास्यास्पद लाइनहरू लेख्नु पर्छ र कसैलाई हाम्रो मार्केटिङ गर्न केही छाला देखाउन पाउनु पर्छ?
ठिक छ म एक केटा हुँ त्यसैले स्पष्ट रूपमा छाला कारकले मेरो लागि केहि गर्दैन। यसको सट्टा, यो तिनीहरूले उहाँलाई दिने रमाइलो संवाद र उसले बोल्ने तरिका हो जसले यसलाई मेरो लागि हास्यास्पद बनाउँछ। अब अर्कोतर्फ महिलाहरूको फरक धारणा हुन सक्छ।
त्यसैले मलाई यो छालाको बारेमा लाग्दैन। यो चतुर हुनुको बारेमा हो। मलाई लाग्छ टोयोटा "स्वागर वैगन" भिडियो मैले देखेको सबैभन्दा रचनात्मक र एकदमै रमाइलो भिडियोहरू (व्यावसायिक?) मध्ये एक हो। र हो, यसले मलाई टोयोटा सिएना किन्न चाहन्छ।
GoDaddy को लागी, पक्कै पनि छाला अपील प्रभावकारी छ। तर इमानदारीपूर्वक, ती विज्ञापनहरू बाहिर आउनु अघि मैले GoDaddy बाट किनेको थिएँ र विज्ञापनहरूको कारणले गर्दा मैले अरू किन्न थिइन। यदि भोलि HostGator ले "छाला" विज्ञापनहरू देखाउन थाल्यो भने म विज्ञापनको कारणले गर्दा तिनीहरूमा सबै कुरा स्विच गर्नेछु। न त म तिनीहरू मार्फत मेरो अर्को डोमेन किन्न सक्छु।
Crud, HostGator मा अन्तिम वाक्य हुनुपर्दछ "म * तिनीहरूमा सबै कुरा स्विच गर्दिन ..."
"यद्यपि यो मेरो बिन्दु हो। के हामीले हाम्रा सबै परिष्कृत लक्ष्यीकरण र ड्रिप अभियानहरू त्यागेर केही हास्यास्पद लाइनहरू लेख्ने र हाम्रो मार्केटिङ गर्नको लागि कसैलाई छाला देखाउन लगाउनु पर्छ?" - डग, कुनै अपराध छैन तर तपाईं यस आधारमा टाढा हुनुहुन्छ। पुरानो स्पाइसले आफ्नो ब्रान्डलाई केही धेरै रचनात्मक मार्केटिङको साथ युवा दर्शकहरूमा स्थानान्तरण गर्दैछ। उनीहरूले आफ्ना लक्षित दर्शकहरूमाझ पुग्न धेरै माध्यमहरू, प्रिन्ट, टेलिभिजन, अनलाइन (यूट्यूब), र सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। कसरी, एक मार्केटरको रूपमा, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यो कम्तिमा धेरै राम्रो अभियानको राम्रो सुरुवात होइन? केवल किनभने तिनीहरूसँग ड्रिप अभियान छैन यसको मतलब यो खराब मार्केटिङ होइन।
मलाई लाग्छ 'यसले अझ पुरानो मसला बेच्नेछ' भन्ने प्रश्न धेरै मानिसहरू अहिले जवाफ दिन डराउँछन् 🙂
मलाई लाग्छ यो हुनेछ। यो ब्रान्डको लागि सबै सकारात्मक छ। मलाई लाग्छ धेरैले पुरानो स्पाइसमा नयाँ रूप लिनेछन् किनकि हामीले विगत २ दिनदेखि यसको बारेमा सोचिरहेका छौं… विशेष गरी यदि उनीहरूले महिलाको सुगन्धित शरीर धुने प्रयोग गर्दैछन् 🙂
जे होस्, के ब्रान्डले मलाई भावनात्मक रूपमा जोड्नको लागि केही गरिरहेको छ? के यसले वफादारी निर्माण गर्छ? संलग्न हुनु बाहेक, वास्तवमा होइन। मलाई लाग्छ कि यो अभियान हामीले औपचारिक रूपमा विज्ञापन भनिने कुराबाट आउन बाँकी रहेको एउटा टुक्रा मात्र हो।
डगलस, अभियान पक्कै पनि हास्यास्पद छ। यसले मानिसहरूलाई ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्छ। जुन ब्रान्डको साथमा तपाईको बुबा वा हजुरबुवाले मात्र प्रयोग गर्ने कुरा हो, मानिसहरूलाई यसलाई पुन: प्रयास गर्न प्राप्त गर्ने पहिलो चरण हो। आफ्टर सेभ मात्र गरेपछि पुरानो मसला धेरै परिवर्तन भएको छ। मलाई लाग्छ ओल्ड स्पाइस हास्यास्पद र कमेन्टको लागि बढि गइरहेको छ अला द मोस्ट इन्टरेस्टिंग गाई इन द वर्ल्ड, एक्से जस्तो अरू चीज भन्दा।
GoDaddy को तुलनामा म तपाईंसँग सहमत हुन सक्दिन। स्पष्ट रूपमा, GoDaddy ले ती विज्ञापनहरूसँग पुरुषहरूलाई लक्षित गर्दैछ। यदि ओल्ड स्पाइसले बेच्नको लागि सेक्स अपील प्रयोग गर्न गइरहेको थियो भने, तिनीहरूले Axe जस्तै सबै GoDaddy केटीहरू उहाँमाथि खस्नेछन्।
म प्याट्रिकले बनाएका धेरै बुँदाहरूसँग सहमत छु, र "स्वाग्गा वैगन" एक उत्कृष्ट व्यावसायिक हो, र ट्रंक मोन्की विज्ञापनहरू पनि उत्कृष्ट छन्। मलाई लाग्छ फनी लामो समय सम्म रहन्छ र अधिक यादगार छ।
De 40 ड्यूस
मैले पहिले भन्न चाहन्छु कि मलाई पनि यो अभियान मन पर्छ। यो रमाइलो छ र मानिसहरू संलग्न हुन चाहन्छन्। उनीहरूले योभन्दा बढी के माग्न सक्थे।
अब, यदि यो वास्तवमा पुरानो मसाला बेच्दै छ भन्ने बारे तपाईको प्रश्नको रूपमा, त्यो बहसयोग्य छ। मलाई लाग्छ कि धेरैजसो मानिसहरूले तपाईंको बारेमा उस्तै विचारहरू राख्छन् जुन "मेरो बुबाले 70 को दशकमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो" तर मलाई लाग्छ कि अभियानले त्यो छवि परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। यसले युवाहरूलाई मेरो बुबाको लागि एउटा रमाइलो ब्रान्डको रूपमा विचार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
मैले वास्तवमा आज बिहान मेरो ट्विटर स्ट्रिममा कसैलाई याद गरें कि अभियान हेरे पछि तिनीहरू पहिले भन्दा ब्रान्डमा बढी खुला छन्। के यसको मतलब तिनीहरूले यसलाई किन्न जाँदैछन्? हुनसक्छ। त्यो तिनीहरूले यसको गन्ध कसरी मन पराउँछन् भन्ने कुरामा तल आउनेछ, तर मलाई लाग्छ कि यसले पहिलेको तुलनामा औषधि पसलमा पुरानो मसला हेर्दै धेरै मानिसहरू छन्।
शेल्डन, सिसोमोसका लागि सामुदायिक प्रबन्धक
अब म घोडामा छु!
यदि तपाईंले यी विज्ञापनहरू सोशल मिडिया मार्फत कसरी उत्पन्न हुन्छन् र वास्तविक समयमा उत्पादन गरिन्छ भनेर पढ्नुभएको छैन भने, यो धेरै रोचक पढ्नुहोस्: http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
टिभी गुणस्तरका भिडियोहरू प्रत्येक औसत ७ मिनेटमा उडानमा उत्पादन हुन्छन्।
हो, म पुरानो स्पाइस राम्रो छ र यसले काम गर्छ भन्ने सोच्न पर्याप्त गूंगा छु। धेरैजसो मानिसहरू अझै पनि ओल्ड म्यानको ब्रान्डको रूपमा ओल्ड स्पाइसलाई पिजन-होल गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै - यसले प्रश्न उठाउँछ - के ती फेन्सी ब्रान्डेड, विज्ञापनहरू, र प्रिन्ट विज्ञापनहरूले काम गरे? म ग्यारेन्टी दिन्छु कि तिनीहरू पुरानो स्पाइस YouTube प्रयास भन्दा धेरै महँगो थिए।
म तपाईंसँग छु, मैले सोचे कि यो मनोरञ्जनात्मक, आकर्षक र राम्रोसँग गरिएको थियो, तर हामी सबैले यसलाई एक उत्कृष्ट सामाजिक मिडिया सफलता घोषणा गर्नु अघि म बिक्रीमा प्रभाव हेर्न चाहन्छु...
(मैले यसको बारेमा यहाँ ब्लग गरेको छु: http://bit.ly/9SiQ3L)
मेरी प्रेमिका हिजो राती घर आइन् र मलाई बताइन् कि उनले पुरानो मसाला उठाए र ती भिडियोहरूको कारण हिजो पहिलो पटक गन्ध आयो। उनले यो मन पराएकी थिइन्, र मलाई यो प्रयास गर्न चाहन्छिन्।
यो एउटाको नमूना आकार हो, मानौं, तर त्यो नमूना भित्र यसले काम गरिरहेको छ। 🙂
तिनीहरूले पक्कै पनि धेरै ब्रान्डहरूले आजका दिनहरू मन पराउने कुराहरू हासिल गरे (उपभोक्ताद्वारा चलाइएको र फैलिएको अभियान), र पुरानो स्पाइस अन्ततः फेरि 'कूल' भएको छ। (उम... के यो कहिल्यै राम्रो थियो? मलाई लाग्छ कि म धेरै जवान छु जुन पुरानो मसलाको बारेमा धेरै जान्दछु।)
मेरो लागि, यस प्रकारको विज्ञापनले तपाईंलाई ब्रान्डमा 'विश्वास' गराउन आवश्यक छैन, जस्तै GoDaddy (वेबसाइट होस्टिंग भनेको विश्वासको स्तर चाहिने चीज हो - एक व्यक्तिको सुगन्ध; त्यति धेरै होइन) तर यदि मैले पुरानो देखे भने औषधि पसलको शेल्फमा मसला, म सायद अब यसलाई सुँघ्न दिनेछु, केवल उसले वास्तवमा कस्तो गन्ध आउँछ भनेर हेर्नको लागि 🙂 म ब्रान्डसँग संलग्न छु, मलाई ब्रान्डमा रुचि छ… जुन सबै कुराको लागि गणना हुन्छ, हैन?
मुर्ख राम्रो छ। गूंगा पहुँचयोग्य छ; मुलधार। मुर्ख पलायन हो। तर तपाई यसलाई मूर्ख भन्न सक्नुहुन्न। यो चलाख छ, र यो सेक्स हो। एक संयोजन जुन प्रतिरोध गर्न असम्भव छ। 😉
बरु एक विरोधी दृष्टिकोण सुन्न राम्रो छ, तर यो अभियान GoDaddy सुपर बाउल विज्ञापनहरू भन्दा धेरै फरक छ। निष्पक्ष तुलना IMO होइन। स्याउलाई स्याउ होइन, रिबेइमा स्याउ हो।
GoDaddy अभियानसँग मात्र समानता भनेको "छाला देखाउने" भाग हो।
म सहमत छु कि छालाको लागि छाला अयोग्य र गूंगा छ यदि यो सबै थियो तर यस अवस्थामा यो थप आकर्षक अभियानको लागि पूरक फेसनमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रमाण? मलाई लाग्दैन कि धेरै केटीहरूले GoDaddy नि:शुल्क विज्ञापनहरू आफ्ना साथीहरू र नेटवर्कहरूसँग साझेदारी गरे। वैकल्पिक रूपमा, धेरै केटाहरूले साझा गरे र पुरानो स्पाइस विज्ञापनहरू साझेदारी गर्न जारी राख्छन्, प्राथमिक दृश्य तत्वको रूपमा शर्टलेस मानिस भए तापनि। तिनीहरू त्यसो गर्न इच्छुक छन् भन्ने तथ्यले उनीहरूले साझेदारी गरिरहेको कारण "छाला" होइन भनेर देखाउँछ।
GoDaddy का विज्ञापनहरू परम्परागत एकतर्फी विज्ञापन थिए, सही? त्यहाँ कुनै निजीकरण थिएन र मेरो लागि ड्यानिका प्याट्रिकसँग सीधा "संलग्न" हुने कुनै तरिका थिएन। तपाईंका अन्य उदाहरणहरू जस्तै। ओल्ड स्पाइस केटाले उसलाई प्रश्न सोध्ने निश्चित व्यक्तिलाई जवाफ नदिए पनि, त्यो आशा र उसले धेरैलाई जवाफ दिन्छ भन्ने तथ्यले यसलाई GoDaddy, Twilight, Sex and the City र बियर विज्ञापनहरूमा भ्यागुताहरू भन्दा फरक पार्छ। ।
यो संलग्नता र निजीकरण हो जसले यसलाई फरक बनाउँछ। एक बुद्धिमान मार्केटरले एक पटक मलाई भने कि सबै इमेल मार्केटिङ 1) अपेक्षित 2) व्यक्तिगत र 3) सान्दर्भिक हुनुपर्छ। धेरै कम्पनीहरूले इमेलको साथ पनि गर्न सक्दैनन् र पुरानो स्पाइसले यसलाई विज्ञापन अभियानको साथ गर्न व्यवस्थित गर्यो।
गत हप्ता भन्दा पहिले, मलाई विश्वास लाग्दैन कि मैले 'ओल्ड स्पाइस' शब्दहरू बोलेको छु जबसम्म ठट्टामा बूढो मानिसको गन्धलाई उल्लेख गर्दैन। तर, मैले पनि ‘ओल्ड स्पाइस’ सोसल मिडिया क्याम्पेन कुल–एड पिएँ । यो मलाई मन पर्छ। यो आकर्षक छ। यसले मलाई ट्विटरमा दौडिन र पुरानो स्पाइस केटाले मेरो लागि मात्र एउटा भिडियो बनाउने आशामा साँच्चिकै धूर्त कुरा लिएर आउन चाहन्छ। के उसको सेक्स अपीलसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ? होइन। यो क्षणिक प्रसिद्धि (हो, म त्यो उथलपुथल हुँ), ब्रान्डसँगको साँच्चै राम्रो संलग्नता (मैले किनेको होस् वा नहोस्) र साथीहरूसँग साझा गर्नको लागि साँच्चै रमाइलो कुराको विचार हो। के यो सबै उत्साह मेरो लागि बिक्रीमा अनुवाद गरिएको छ? होइन। तर म तिमीलाई भन्छु कि अर्को पटक म सेल्फमा छु, म तिनीहरूको प्याकेजिङ खराब केटाहरू मध्ये एकको माथि पप अफ गर्न जाँदैछु र एक हफ्फ लिन जाँदैछु। एउटा ठूलो अभियान र म औषधि पसलमा पैसा निकाल्ने बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण बाधा छ। त्यो उत्पादन हो। यदि यसले राम्रो गन्ध गर्दैन भने, राम्रोसँग काम गर्नुहोस् र पैसाको लागि मूल्य प्रदान गर्नुहोस् म लेनदेन गरिरहेको छैन। पुरानो स्पाइसमा राम्रो छ मलाई उनीहरूको ब्रान्डलाई मेरो विचार सेटमा राख्न बाध्य तुल्याएकोमा।
- जागरूकता: जाँच गर्नुहोस्
- कुराकानी: जाँच गर्नुहोस्
यो जहाँसम्म धेरै विज्ञापन अभियानहरू जान सक्षम छन्, तर मेरो लागि यो टाढा गएको छ:
- विचार (यसलाई शेल्फमा हेर्नुहोस् र यसलाई नोटिस गर्नुहोस्, यसको बारेमा सोच्नुहोस्): जाँच गर्नुहोस्
- एकल खरिद: जाँच गर्नुहोस्
म मेरो gf (यदि उनी क्यानाडामा थिइन्) रोकिरहेको, सुगन्धित र यी कारणले ममाथि प्रयास गर्न चाहन्छु। यसले दर्शकहरूको 1/20 औं भागमा एउटै खरिद मात्र गर्न सक्छ, तर त्यस समयमा यो उत्पादनको काम दोहोरिने खरिदहरू चलाउनु हो।
यो मेरो पुस्तकहरूमा एक जीत हो, जुन वास्तवमा भन्न गाह्रो छ किनभने यो उथलपुथल छ। शानदार रूपमा कार्यान्वयन गरिएको, प्रफुल्लित रूपमा हास्यास्पद, जादुई रूपमा सोशल मिडियामा एकीकृत तर अझै उथला। र मलाई यो मन पर्छ।
यी विज्ञापनहरूको विचार हो:
1. जागरूकता बढाउनुहोस्। सकियो।
2. कुराकानी सुरु गर्नुहोस्। सकियो।
3. सेल्फहरूमा पुरानो मसला देखिरहेका मानिसहरूलाई पाउनुहोस्। सकियो (मेरो माथिको टिप्पणीहरू पढ्नुहोस्)।
4. मानिसहरूलाई उत्पादन किन्न लगाउनुहोस्। फेरि, गरियो। पक्कै पनि नम्बरहरू आउँदैछन् तर पहिले नै मैले याद गरें कि मेरा साथीहरूले यसलाई प्रयास गरिरहेका छन् यद्यपि तिनीहरूका बुबाले यसलाई दिनमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो।
तर म यसलाई सामाजिक सञ्जालको सफलताको कथा भन्नको लागि यति टाढा जाने छैन। के यो ब्रान्ड जागरूकता बढाउन सफल छ? नर्क हो। वास्तवमा, मैले ओल्ड स्पाइस केटा र डोस इक्विस केटा बीचको झगडा कसले जित्ने भन्नेमा दौडने ट्याली पाएको छु (मान्छु कि चक नोरिस अवस्थित थिएन किनभने हामी सबैलाई थाहा छ कि उसले जित्छु) तर जबसम्म मैले बिक्रीको संख्या नदेखें। उत्पादन अहिले सम्म यो केवल एक जागरूकता अभियान को रूप मा प्रयोग गरिएको छ। :) प्रश्न यो छ कि तपाईलाई माया गर्न सकिन्छ तर उत्पादन सार्न पनि?
तपाईं Dos Equis केटालाई माया गर्न सक्नुहुन्छ, तर के तपाईंलाई Dos Equis बियर मन पर्छ? के तपाईंले पहिलो केही विज्ञापनहरू पछि यसलाई एक पटक किन्नुभयो? के तपाईंले यसलाई पछि किन्न जारी राख्नुभयो? यदि त्यहाँ ब्रान्ड र उत्पादन बीचको सम्बन्ध विच्छेद छ भने, तपाइँ केवल एक-अफ खरिदहरू प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन अन्तिम लक्ष्य होइन। तपाईं एक ब्रान्ड वफादारी सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ - जतिसुकै आकर्षक नारा(हरू)।
म अफ-बेस छु जस्तो लाग्छ?
मलाई बाहिर बोलाउनुहोस् तर चेतावनी दिनुहोस्: म एक प्रेमी हुँ लडाकू होइन तर म पनि एक लडाकु हुँ त्यसैले कुनै विचारहरू प्राप्त नगर्नुहोस्।
अब आफ्नो महिलालाई हेर, अब मलाई हेर्नुहोस्। म घोडामा छु।
अर्को रात किराना पसलको गलियारेमा हिंड्दै मैले पुरानो मसला भेटें। यदि मैले प्रसाधन सामग्रीहरूमा राम्रोसँग भण्डारण नगरेको भए म यसलाई प्रयास गर्नको लागि किनेको थिएँ। अभियानले निश्चित रूपमा यसलाई दिमागको शीर्षमा धकेलिरहेको छ र उपाख्यानात्मक प्रमाणहरूले यसले एक वा दुई बिक्री गरिरहेको देखाउँदछ।
मलाई यो अभियानको बारेमा मनपर्ने कुरा यो हो कि यसले इन्टरनेट संस्कृतिको विचित्र प्रकृति बुझ्दछ। टोलीले कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको थिएन, तिनीहरू सुनिरहेका थिए र तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। एलिसा मिलानोसँग फ्लर्टेशन, उनको घरमा गुलाब पठाउनको लागि। विवाह प्रस्ताव को वितरण। ओल्ड स्पाइस म्यानले प्रख्यात लोकसँग मात्र कुरा गर्छ भनी ठट्टा गर्दै कुनै ठूलो फलो नगरेको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। साउन्डबाइटको डेलिभरी ताकि रेडडिट समुदायले सिर्जना गर्न सक्छ http://oldspicevoicemail.com
के यो उच्च कला हो? होइन, तर, साबुन बेच्नु कहिल्यै उच्च कला थियो?
म पक्कै पनि P&G ले अभियानबाट कस्तो प्रकारको नतिजाहरू देख्नेछ भनेर जान्न इच्छुक छु र अभियानको यो हालैको स्ट्रेचले प्रारम्भिक सुपर-बाउल विज्ञापनको तुलनामा छाप र बिक्रीको सर्तमा कसरी तुलना गर्छ भनेर जान्न चाहन्छु।
…मोनोकल मुस्कान P_^
ब्लग वर्ल्ड एक्सपो
तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई कसरी थाहा छ यो एक ठूलो विजयी अभियान हो?
प्रतिक्रिया पाएको कारणले। तपाइँ तपाइँको विश्लेषण मा बिल्कुल सही हुनुहुन्छ तर दिन को अन्त मा विज्ञापन कला जस्तै छ। यदि मानिसहरूले यसलाई राम्रो ठान्छन् भने, त्यो उथले, चकचके, चतुर, चकचके, थकित, लङ्गडा, जेसुकै भए पनि राम्रो हुन्छ। हास्यास्पद हास्यास्पद छ, राम्रो राम्रो छ र नतिजाहरू के महत्त्वपूर्ण छन्।
तलका धेरै व्यक्तिहरूले पहिले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् कि मानिसहरूले पहिले नै 60 वर्ष मुनिका कसैले 20 वर्षदेखि किनेको उत्पादनलाई विचार गर्दै, प्रयास गर्दै र खरीद गरिरहेका छन्।
यी केटाहरूले केही सबैभन्दा अनुभवी र निन्दनीय सोशल मिडिया प्रभावकारहरूलाई बोर्डमा हाम फाल्न र उनीहरूको अभियानलाई बढावा दिन र यसलाई वास्तविक सडक क्रेडिट दिन उत्प्रेरित गरे। केहि धेरै थोरै ब्रान्डहरूले कहिल्यै गर्छन्।
त्यो घरको दौड हो!
मलाई थाहा छ कि म हाल पुराना मसला उत्पादनहरू प्रयोग गर्छु र मैले तिनीहरूलाई प्रसिद्ध 'म घोडामा छु' विज्ञापनको समयको वरिपरि किन्न थालेको छु। के त्यो विज्ञापनको लागि पूर्ण रूपमा धन्यवाद हो? म निश्चित छुँइन।
हामीले यो अभियानको साथ नयाँ व्यापार मापन गर्न सक्छौं वा मलाई होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिणाम होइन। मलाई लाग्छ कि, जेरेमी राइटले आफ्नो टिप्पणीमा संकेत गरेझैं, त्यो वार्तालापहरूलाई एक योग्य मेट्रिकको रूपमा मान्नुपर्छ किनभने सकारात्मक कुराकानीहरूले ब्रान्डको अनुभवलाई परिभाषित गर्दछ र यसलाई जनतासँग कसरी राखिएको छ। सोशल मिडिया एक ब्रान्डलाई उपभोक्ताहरूद्वारा प्रभावित हुन दिने राम्रो तरिका हो, जसले यसलाई खरिदकर्तासँग थप प्रतिध्वनि गर्न अनुमति दिन्छ। मलाई लाग्छ कि पुरानो स्पाइसले यस्तै भावनामा ठोकर खायो जहाँ ग्राहकले बोल्नको लागि 'टोलीको हिस्सा' महसुस गर्छन्।
तल क्लेसँग सहमत हुँदै... GoDaddy असफल भयो किनभने यसले टाढाबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्दैन, स्तनहरू बिना, र तपाईलाई के थाहा छ ... 2010 मा स्तन देखाउने हलिउड 'ब्लकबस्टर' जत्तिकै प्रभावकारी छ जसमा राम्रो 'विशेष प्रभावहरू' छन् तर कुनै कथा छैन ... जुरासिक पार्कले तोड्यो। मोल्ड (र दिन बोक्नको लागि एक आकर्षक पर्याप्त कथा थियो) ... तर के तपाईलाई याद छ, ओह मलाई 'गॉडजिला' को रिमेक थाहा छैन ... फिल्म म्याथ्यू ब्रोडरिक पक्कै पनि उसले कहिल्यै, कहिल्यै, कहिल्यै, कहिल्यै सुनेको छैन भन्ने कामना गर्दछ ... लाजको लागि म्याथ्यू।
GoDaddy विज्ञापनहरू = Godzilla को डरलाग्दो रिमेक ... पुरानो स्पाइस = नयाँ चलचित्र इन्सेप्शन (केवल यो ठोस छ, यो देखेको छैन) ... तर दर्शकहरूलाई खिच्ने मनोरञ्जन उर्फ ​​दृश्यात्मक र अद्भुत कथाको मिश्रण।
यस अवस्थामा, पुरानो मसला विज्ञापनहरू रमाइलो थिए र तिनीहरूले व्यक्तिहरूसँग जोड्ने तरिका र तरिका साँच्चै 'उत्कृष्ट' थियो ... यो त्यति राम्रो थियो, अवधि।
माफ गर्नुहोस् क्रिस! मलाई लाग्दैन @GuyKawasaki र @AlyssaMilano 'कान्छो' दर्शक होइनन्। साथै, सोशल मिडिया 'युवा' दर्शक होइन। प्रवृतिहरूले देखाउँदैछन् कि मध्य 30s र पुरानाहरू सोशल मिडियामा सबैभन्दा छिटो अपनाउने दर छन्। यो एक शुद्ध भाइरल प्ले थियो... ठूला दर्शकहरू भएका अनलाइन मानिसहरूलाई औंल्याउनुहोस्, तिनीहरूको ध्यान खिच्नुहोस् (र तिनीहरूको EGO) र तिनीहरूलाई पुरानो स्पाइसको बारेमा कुरा गर्न लगाउनुहोस्।
मैले भनेको होइन कि यो खराब मार्केटिङ थियो, म मात्र उत्सुक छु यदि यो मार्केटिङ हो कि वास्तवमा काम गर्नेछ।
उम्म... म पुरानो मसला लगाउँछु। मलाई थाहा थिएन कि म यति अप्रचलित छु।
पुरानो मसाला स्टन्ट को तपाइँको विश्लेषण = FALSE।
पुरानो स्पाइस भिडियोहरू स्क्रिनमा कुनै पनि कुराको बीसीमा थिएनन्, तर उनले के भनेका छन् त्यो अद्भुत छ। म पक्का छु कि यो दुई चीजहरू छन्: (a) उसले हामीसँग कुरा गरिरहेको छ र (b) उसले के भनेको चलाख छ। तिनीहरूले आफ्ना साना प्रतिक्रियाहरूमा ल्याएका फैलिएको ज्ञानको मात्रा संक्षिप्त र तीक्ष्ण दुवै छन्। उनीहरूलाई के भन्नु भन्ने ठ्याक्कै थाहा थियो, र ती प्रतिक्रियाहरूको समय र समयबद्धताले हामीलाई मोहित पार्छ। हामी वेब सर्फिङ गर्दा एक अमानवीय, अज्ञात अनुभवको लागि यति अभ्यस्त छौं कि जो एभरम्यान (अर्थात एकरसता तोड्न) लाई फिर्ता कुरा गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई खुल्ला हातले स्वागत गरिन्छ। किन फ्ल्यास भीड अहिले यति लोकप्रिय छ? ठ्याक्कै उही कारणको लागि (तर पुलिस भित्रको हाम्रो अयोग्य अनुभवसँग सम्बन्धित)। यो इन्टरनेटमा लगभग कम अपेक्षा गरिएको छ किनकि यो मैदानमा हराउनु लगभग दोस्रो प्रकृति हो। पुरानो स्पाइसले अविश्वसनीय रूपमा स्पष्टसँग कुरा गर्ने सम्भावना बनायो, र यदि हामीले भाग लियौं भने, हामी जो एभरम्यानसँग समावेश हुन चाहन्थ्यौं।
के तपाई घोडामा सवार हुनुहुन्छ?
म पुरानो स्पाइस शावर उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछु। कुनै दुर्गन्ध वा अन्य केहि छैन। तिनीहरूको नुहाउने उत्पादनहरू साँच्चै राम्रो छन्। यी विज्ञापनहरू दृश्यमा सुरु हुँदा मलाई यो रमाईलो लाग्यो।
तिनीहरू मेरो बुबा भन्दा कान्छो छन्, त्यसैले हो एक युवा दर्शक! 🙂 तिनीहरूसँग सोशल मिडिया पक्षको अगाडि टिभी स्पटहरू रोलिङ बाटो थिए... यो अझै पनि एक बहु-च्यानल मार्केटिङ प्रयास हो जुन ठूलो अभियानको हिस्सा हो जस्तो देखिन्छ। प्रमाण सधैं # मा हुन्छ त्यसैले हामीले कुर्नु पर्छ र यसले काम गर्यो कि भनेर हेर्नु पर्छ। अहिले यो काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ...यसले तपाईलाई यसको बारेमा लेख्न पायो...र तपाई आफैं एक स्मार्ट मार्केटर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा, म शर्त गर्छु कि तपाईलाई थाहा थियो कि यो पोस्टले धेरै छलफल र लिङ्क रस पनि कमाउनेछ 🙂
निक, त्यसोभए म। तर म अझै यी विज्ञापन मा मान्छे जस्तै देखिन्छन्!
यो अभियान सामाजिक सञ्जालको सफलता हो कि होइन भन्ने निर्णायक कारक ड्राइभिङ राजस्व हो? म फरक गर्न बिन्ती गर्न सक्छु किनकि यो मलाई लाग्दछ कि तपाईको लेखमा मात्र 26 टिप्पणीहरू, अनगिन्ती (लाखौं हुनसक्छ) ट्वीटहरू र अन्य सामाजिक मिडिया अन्तर्क्रियाहरू सबैले सोशल मिडिया मार्केटिंग सफलताको कथालाई औंल्याउँछन्।
यदि त्यहाँ प्रत्यक्ष बिक्री वृद्धि नभए पनि ब्रान्ड जागरूकता र नयाँ बजारको परिचयमा वृद्धिको मूल्य छैन र अर्को प्रयासहरूको लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्न गाह्रो छ।
'केही खरिदहरू' वा खरिदहरूमा भएको स्पाइकमा पनि यस किसिमको अभियानमा सफलताको संकेत गर्न आवश्यक लगानीमा प्रतिफल नहुन सक्छ।
म यसलाई थप पुरानो मसला बेच्ने शर्त राख्छु - किनभने यसले जागरूकता सिर्जना गर्दछ ताकि अर्को पटक तपाईं स्टोरमा आउँदा तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि आजको पुरानो मसाला तपाईंको बुबाले 1970 को दशकमा लगाएको पुरानो मसाला होइन। तिनीहरूले आफ्नो लाइन धेरै विस्तार गरेका छन् र केही नयाँ सामानहरू एकदम शानदार छन्।
तर पनि एक ब्रान्ड वा जागरूकता 'अन्तिम लक्ष्य बिक्री हो।
हामी पुराना केटाहरू जो केही समयको लागि वरिपरि छन्, यस्ता धेरै अभियानहरू आउँदै गरेको देखेका छौं। हामीले सबैजना शानदार अभियानहरूमा रूफटपबाट चिच्याएको देख्यौं, केवल स्टक मूल्यहरू र बिक्री पछि गिरावट जारी हेर्नको लागि। त्यसैले म यो अभियानको आलोचना गर्छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो मनपर्छ र म कति आवाज सुन्छु भनेर चकित छु... तर म सोच्दछु कि दीर्घकालीन प्रभाव त्यहाँ हुनेछ कि छैन।
यो अभियान सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न वा आरक्षण बाहेक सबै बुँदाहरूमा सहमत।
स्ल्याम डंक, कुनै पनि कम्पनीको लागि, अद्भुत मार्केटिङ र अद्भुत उत्पादनहरू हुनु हो। मलाई कुनै शङ्का छैन कि यो अभियानले मानिसहरूलाई खरिद गर्न धकेल्छ ... तर यदि उत्पादनहरू "गन्ध" (श्लेष 😛) छन् भने, तपाइँ मार्केटिङलाई दोष दिन सक्नुहुन्न।
अर्को शब्दमा, म विश्वास गर्छु अभियानको उद्देश्य - ओल्ड स्पाइस वा डस इक्विसको लागि - 'मेरो उत्पादन प्रयास गर्नुहोस्' ... होइन 'मेरो उत्पादनको लागि आजीवन अधिवक्ता बन्नुहोस्'। त्यस सन्दर्भमा, यो पुरानो मसला अभियान अत्यन्तै सफल छ!
सत्य हो तर के यो विशेष प्रयासको लक्ष्य थियो? तिनीहरू स्पष्ट रूपमा केहि नयाँ प्रयास गर्दैछन्, पुरानो स्पाइस ब्रान्डलाई पुनरुत्थान गर्न र युवा पुस्तालाई अझ आकर्षक बनाउन प्रयास गर्दैछन्। अन्ततः यसले बिक्रीको नेतृत्व गर्नेछ तर के यो प्रयासको लागि लक्ष्य थियो वा चेतना र पुन: ब्रान्डिङको बारेमा बढी लक्ष्य थियो जुन पुरानो मानिसको उत्पादनको रूपमा मानिएको थियो? अब तिनीहरूसँग एक उत्कृष्ट प्लेटफर्म छ जहाँबाट अगाडि बढ्न र ड्राइभिङ राजस्वलाई दिमागमा उत्पादनको प्रचार गर्न। त्यो सफलता होइन र ? के त्यो सामाजिक सञ्जालबाट प्रेरित भएन ?
जुलाई,, २०१ at 16::2010। बिहान
यसलाई तल गूंगा? हो। अन्यथा यो भाइरल हुने छैन। यहाँ एक वास्तविक संसार परिदृश्य छ। किनभने ओल्ड स्पाइसले यस प्रकारको गैर-विज्ञापन छलफलहरूलाई उत्प्रेरित गर्न तिनीहरूको भाइरल अभियान सुरु गर्‍यो, मलाई थाहा छ धेरै केटाहरू यहाँ तिनीहरूका उत्पादनहरू कत्तिको उत्कृष्ट छन् भनेर चिन्तित छन्। अब म अर्को पटक पसलमा जाँदा शेल्फको पुरानो स्पाइस खण्ड जाँच गर्न बाध्य महसुस गर्छु। तिनीहरूले भर्खर नयाँ ग्राहक जितेका छन्।
म एडमसँग सहमत छु, वास्तविक सफलताका कथाहरू डोमिनोज र ओल्ड स्पाइस जस्ता रिब्रान्डिङ अभियानहरूमा निहित छन् जसले मानिसहरूलाई संलग्न र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक बज उत्पन्न गर्दछ- त्यसपछि तिनीहरूले उत्पादनको पक्षमा आफ्नो राय परिवर्तन गर्ने आशा राख्छन्। हो, ठूला व्यवसायहरूद्वारा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा धेरै गतिविधिहरू प्रत्यक्ष राजस्व परिवर्तनहरूसँग मापन गर्न गाह्रो छ, तर वास्तवमै आकर्षक कुराकानी उत्पन्न गर्ने मूल्य ठूलो छ।
यदि यो धेरै गूंगा र सजिलो छ भने, किन यो धेरै गरिरहनु भएको छैन? स्पटहरू शानदार छन् किनभने मानिसहरू पुरानो मसलाको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। अवधि। विस्मयादिबोधक बिन्दु।
तपाईको कुरा मान्य छ तर अप्रासंगिक छ। यो मार्केटिङ हो र यो गूंगापन मा शानदार छ। BTW, मलाई लाग्छ पुरानो स्पाइस विज्ञापनहरूमा रिपार्टी GoDaddy भन्दा अलि चलाख छ।
लिंक जुसको स्वाद कस्तो हुन्छ? 😛
सज्जनहरू, तपाईंले एउटा महत्त्वपूर्ण बजार खण्ड गुमाउनुभएको छ... यो अभियान पुरुषहरूलाई लक्षित गरिएको छैन... यो महिलाहरूलाई लक्षित गरिएको छ। हामी हाम्रा श्रीमान् र प्रेमीका लागि सामानहरू किन्छौं। र हामीलाई अभियान मन पर्छ .. :*
जुलाई,, २०१ at 26::2010। बिहान
खैर ... बिक्री कम छ: http://mkt.gs/dz3AJD
हो, यो अभियानले धेरै पुराना मसला उत्पादनहरू बेचिरहेको छ।
Neilson Co. का अनुसार ५२ हप्तामा बिक्री ११% ले बढेको छ, र पछिल्ला तीन महिनामा बिक्री ५५ प्रतिशतले बढेको छ र गत महिनामा १०७ प्रतिशतले बढेको छ। http://bit.ly/brandweek-old-spice (ब्रान्डवीक जुलाई २५, २०१०)
जुलाई 1.6 मा समाप्त भएको चार हप्ताको अवधिमा रेड जोनको बिक्री $ 11 मिलियन पुग्यो, जुन फेब्रुअरी 49 मा समाप्त भएको चार हप्ताको अवधिको तुलनामा 21 प्रतिशतले बढेको छ, SymphonyIRI को डेटाले देखाउँछ। अन्य चार ओल्ड स्पाइस बडी वाश उत्पादनहरूले पनि लिफ्ट देखाउँछन्। ओल्ड स्पाइस बडी वाशको समग्र बिक्री त्यस अवधिमा १०५ प्रतिशतले बढ्यो
यदि यी संख्याहरू सही छन् भने, यो मेरो लागि अचम्मको सफलता जस्तो देखिन्छ।
पूर्व 2010 "पुरानो मसाला = ओल्ड म्यान सकल!"
पोस्ट 2010 "पुरानो मसला = घोडामा बसेको मानिस सबैले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत कुरा गरिरहेका र साझेदारी गरिरहेका छन्"